Bilihii Xisaabtan la’aanta ee Puntland iyo gadoodka ciidamadamada oo bilowday. – Madal Furan
Hoy > Warka > Bilihii Xisaabtan la’aanta ee Puntland iyo gadoodka ciidamadamada oo bilowday.
Bilihii Xisaabtan la’aanta ee Puntland iyo gadoodka ciidamadamada oo bilowday.
Gaalkacyo (Madal Furan) – Maamulka Puntland ayaa ku guda jira Saddexdii bilood ee ugu danbeeyey mudo xileedkii Shanta aheyd ee uu xilka hayey Madaxweynaha Puntland.
Bilahaan ayaa loo yaqaan “Bilihii Xisaabtan La’aanta” taasoo macnaheeda loola jeedo wakhti sii dhamaanaya iyadoo Puntland aysan ka daawoobin mudadii 20-ka sanadood aheyd in sanadka ugu danbeeyey xilka Madaxweynaha Puntland uu noqdo xili aan waxba la is weydiinin.
Shaqaalaha iyo ciidamadda dowladda ayaa waxaa soo wajaha mushahar la’aan taasoo sababta in magaalooyinka laga dareemo dhaqaale xumo, maadaama aysan dowladdu bixin wax mushar ah.
Waxaa caado ah in la arko ciidamada oo xirnaya wadooyinka, ama qabsanaya Bangiyada iyo goobaha ay ku tuhmayaan in dhaqaale yaalo, taasoo ay ka dhigtaan “qaylo gar dhoweysay” si ay u helaan xusuuqdooda ka maqan mudada bilooyinka ah.
Shaqaalaha dowladda oo ah dad aan hubeysneyn ayaan iyagu awoodin inay carqalad sameeyaan waxayna dhaxlaan sanado deyn ah kadib marka dowladda cusub u sheegto in la laalay deymihii hore ee dowladii xilka wareejisay ay xuquuqdoodii la tagtay.
Haddaba, dadka socotada ah ee mara wadada laamiga ah ee isku xira Boosaaso iyo Gaalkacyo ayaa dadweynuhu cabasho ka muujiyeen kadib markii ciidamo mushahar la’aan ka caraysan ay xireen jidka magaaladda Carmo ee gobolka Bari.
Waxaa kaloo maanta oo 25kii bishan Agoosto ciidamo ka tirsan Daraawiishta Puntland ay qabsadeen Bangiga magaaladda Gaalkacyo, iyagoo xiray dhamaan dariiqyada soo gala dhismaha Bangiga, waxayna ka cabanayaan in ay waayeen mushaharkooda mudo dhowr bilood ah.
Maamulka Prof. C/weli Maxamed Cali Gaas oo ay xiligan haystaan caqabado badan oo ay ugu weyn tahay in ay gacantiisa ka baxday tuuladda Tukaraq ee gobolka Sool oo ka mid aheyd degsiimooyinka fara ku tiriska ah ee Puntland gacanta ku haysay ee gobolkaas iyo weerarada kaga imaanaya ururada Al-shabaab iyo Daacish.
Waxaa intaas dheer Musharixiinta xilka Madaxweynaha Puntland oo sanadkan oo ah kuwa ugu tirade badan iyadoo qaar ka mid ah ay Musharixiintaas ay leeyihiin tayo iyo khibrad siyaasadeed, taasoo la oran karo waxay walaac ku abuurtay Xukuumadda Dr. Gaas.
Arrintu siday doonto ha ahaatee, Dr. Gaas ayaa la sheegayaa inuu qorsheynayo inuu dagaal ka qarxiyo deegaanka Tukaraq si meesha ay uga baxdo in Puntland ayka dhaco doorashadii ku saleysneyd nidaamka beelaha, maadaama xukuumadda hadda jirtaa ay ku fashilantay ballanqaadkeedii ahaa inay hirgelin doonaan doorasho cod iyo qof ah.
Dad badan ayaa rumeysan in khibradii laga bartay dowladihii hore ee soo maray Puntland ay ka mid aheyd in sanadka ugu danbeeya maamulkooda ay dhaqaalaha u soo xerooda Puntland ay u weeciyaan jeebkooda si ay ugu dagaalamaan in kursiga dib ugu soo laabtaan, balse arrintaas ayaan marnaba noqon mid ka dhacda Puntland gudaheeda, mana jirto dabagal xisaabeed ee weligeed laga sameeyey sababta ay ciidamada iyo shaqaalaha Puntland u waayeen xuquudooda uga maqan xukuumadda bustaheeda qaadatay.
Degmada Aadan Yabaal oo dhaliyaro ku nooli ay sheegeen inay la dagaalami doonaan ururka Al-shabaab
Soomaaliya oo ka qeyb galeysa Shirkii 5-aad ee Ururka Wadamada Islaamka oo Turkiga ka furmay